“Ava vachaenda kuchirango chisingaperi asi vakarurama vachienda kuupenyu usingaperi.”
Vakaipa vachadzokera kunzvimbo yavakafa. Marudzi ose anokanganwa Mwari.
2 VaTesaronika 1:9
Vachatambura neshamhu yokuparadzwa zvisina mugumo uye vachabviswa pana Tenzi nekumbiri yesimba rake
vachivakanda mubisiro romoto. Imomo vanhu vachachema vachirumanidza mazino.
Nokuti hamungasii mweya wangu munzvimbo yavafi kana kurega mururami wenyu achiora.
Kana ruoko rwako ruchikukonzera kuti utadze rudimure. Zviri nani kuti upinde muupenyu uri wakaremara pano kupinda mugehena, muvira romoto usingadzimiki, uina maoko maviri.
Sezvakangoita Sodhomu neGomora namaguta akaatenderedza, akaita zvimwechetezvo kuita upombwe vakaitawo zvisina maturo vakave muenzaniso nokurangwa kwavakaitwa nokurohwa nemoto usingaperi.
Nzira youpenyu yavakangwara inoenda kumusoro kuti vanzvenge nzvimbo yavafi iri kwakadzika.
Ukamurova neshamhu unomununura kuenda kunzvimbo yavakafa.
vachivakanda muvira romoto. Ikoko vanhu vachachema vachirumanidza mazino.
“Ipapo achati kuna vari kuruboshwe rwake, ‘Ibvai kwandiri imi makarengererwa rushambwa mupinde mumoto usingaperi wakagadzirirwa Dhiabhori navatumwa vake,
Chikara chiya chakabatwa pamwechete nomuporofita wenhema uya akaita zviratidzo pamberi pacho zvaakanyengedza nazvo vaya vaiva nomucherechedzo wechikara navaya vainamata chifananidzo chacho. Muporofita uya akakandwa ari mupenyu mudziva rinobvira moto wesarufa pamwechete nechikara chiya.
Nzvimbo yavafi nenzvimbo yokuparadzwa dziri pachena-chena kuna Tenzi ko kutozoti mwoyo yavanhu.
Ndichakupa kii dzoumambo hwedenga. Chose chauchasunga pasi pano chichabva chasungwawo kudenga. Chose chauchasunungura pasi pano chichabva chasunungurwawo kudenga.”
Kana Mwari akaita izvi zvokuti haana kurega kuranga vatumwa pavakatadza asi kutoti akavakanda mugomba romoto achivaisa mumakomba apasi pasi ezarima mokumbovachengetera kusvikira pakutongwa.
 Gungwa rakaburitsa vakafa vaiva mariri. Rufu nenzvimbo yavafi zvakaburitsawo vakafa vakanga vari mazviri; vose vakatongwa maererano nezvavakanga vaita. Rufu nenzvimbo yorufu zvakakandwa muzidziva romoto. Urwu ndirwo rufu rwechipiri; dziva romoto.
Munhu anoita chitadzo ndiye anofanira kuti afe. Mwana haafaniri kutambudzika nokuda kwohwutadza hwababa vake kana babawo kutambudzika nokuta kweuipi hwemwana wake. Mururami achawana mubayiro woururami, muipi achiwanawo mubayiro wouipi.